चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ?
कात्तिक २८ गते, २०७६ - १३:४१
रुपन्देही । चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? जनताले यस्तो प्रश्न सोध्दा प्राय ः नेताहरुको बोली नै बन्द हुन्छ । कतिपय नेताको शिर निहुरिन्छ । केहीले असहज परिस्थितिलगायतका कारण देखाएर जनताका प्रश्न थामथुम गर्ने प्रयास गर्छन् । तर, रुपन्देहीमा भने त्यस्तो भएन । चुनावी प्रतिबद्धताको समीक्षासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका यहाँका नेताले शिर ठाडो पारेर बोले । नेताहरुले चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुप भइरहेका विकासे आयोजनाको फेहरिस्त जनता सामु राख्दा यहाँका सर्वसाधारण खुशी हँुदै ताली बजाए ।
कार्यक्रममा आयोजकले चुनावअघि जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गरे भनेर प्रश्न गर्दा सांसद विष्णु पौडेलले आफूले सम्पन्न गरेका कामको लामो सूची प्रस्तुत गर्नुभयो । गौतमबुद्ध अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिदेखि भैरहवा बुटवल ६ लेन सडक, अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, सरकारी मेडिकल कलेज, तिनाउ नदीमा निर्माण भइरहेका पाँचवटा पक्की पुल, ४ लेन बन्दै गरेको बुटवलकोे कालीकापथ, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बेलवास नुवाकोट तथा बेथरी बेलवास पर्यटन सडक, बुटवल र सैनामैनाका नगर परिक्रमा पथलगायतका ठूला–ठूला विकासे आयोजनाका प्रगतीका विषयमा जानकारी दिएयो ।
महासचिव पौडेलले भैरहवा–लुम्बिनी सडक, लुम्बिनी–तौलिहवा सडक, बुटवल– बेथरी सडक, बुटवल– नारायणगढ सडक, बुटवल–कोहलपुर, बुटवल–पोखरा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिपछि रुपन्देही उच्चस्तरको सडक सञ्जालले विभिन्न जिल्लासँग जोडिने बताएयो ।
सो अवसरमा महासचिब पौडेलले आफ्नो अभिभारा काँधमा बोकेर नेकपा नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेकाले जनताले यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने धारणासमेत राखे । “हामीले चुनाबमा गरेका प्रतिबद्धता सिरानीमा राखेर यहाँहरुले अध्ययन गरिदिनुहोला”, महासचिव पौडेलले भने,“ ६० महिनापछि प्रतिबद्धताको समीक्षाका लागि फेरि आउनेछौ ।”
उहाँले सामाजिक सुरक्षा, गरीबी निवारण, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमासमेत धेरै काम अगाडि बढेको उनले बताए । महासचिव पौडेलले सुकुम्वासी समस्या स्थायीरुपमा समधानका लागि कानून निर्माण भएकाले अब काम अगाडि बढ्ने बताए।
ज्येष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको बताउँदै नगरप्रमुख घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो । नगरमा कृषि, पशुपालन, उद्यमशीलता, उद्योग प्रवद्र्धन, फोहरमैला व्यवस्थापन, बजार अनुगमन जस्ता कायर्कलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको उनले बताए ।
कात्तिक २८ गते, २०७६ - १३:४१ मा प्रकाशित